Nhau - Dzokera kune yekutanga Edison bulb tevera girobhu kune runako rweiyo yakachena
Kudzokera kune yekutanga Edison bulb tevera girobhu kune runako rweiyo yakachena
Muna 1809, Englisg mugadziri Humphry Davy akagadzira mwenje wekutanga wemagetsi. Aive akabatanidza matanda akagadzirwa nemarasha, chimiro chemakemikari element kabhoni, kune bhatiri rine waya mbiri. Kunyangwe iwo mwenje usina kugara kwenguva refu, wairatidza kuti zvimwe zvinhu zvakave zvinopisa kwazvo vano penya kana magetsi achipfuura nepakati pavo. Mumakore ekuma1870, muvambi weAmerica Thomas Edison akaedza girobhu remagetsi. Shanduro yake yaive yegirazi-yakasunga girazi kesi yaive netambo yakasungirirwa, inonzi filament, yaive yakabatana nekuyerera kwemagetsi anozivikanwa sezvino. Kana iyo yazvino yanga yakasimba zvakakwana, iyo filament yaipenya chena-kupisa. Tsvina yekutanga haina kugara kwenguva refu, asi muna 1879 akagadzira firita inogara kwenguva refu yakagadzirwa kubva kabhoni.
Vazhinji vedu tinoziva nyaya iri pamusoro, asi tinoziva kuti girobhu rekutanga rinotaridzika sei.
Hongu, zvinoita sezvizvi.
Tiri kuzoburitsa batch yezvimwe zvakasarudzika zvigadzirwa kuti tikoshese ndangariro dzevagadziri vegirobhu vane inoshanduka yakatungamira filament mukati iyo inofambiswa neDC 24V yakatungamira isina kudzika mutyairi.
Isu tiri kukoka shamwari dzekugadzira dzakagadzira dhizaini ino nemwoyo wese.
Pano, ini ndoda kunyora dhizaini dhizaini yevagadziri sereferensi kubva kumaindasitiri ekuona.
1.Girobhu dhizaini, girobhu racho harigone kuve rakanyanya, nekuti kana rakanyanya kurema, huremu huchave hwakawanda uye hoko yegirazi pamwe haigone kutakura huremu, saka tinokurudzira hupamhi hwemabhuru kwete anopfuura 200mm, uye yakakwira kwete anopfuura 300mm.
2.Iyo inoshanduka filament zvivakwa, inochinjika filament chimiro inogona chero chimiro sezvaungaite mufananidzo. Iyo inofanirwa kuenzaniswa mushe neiyo girazi chimiro.
3.Ruvara rwegirazi, inogona kuve akawanda marudzi emavara apera, senge akajeka, amber anopfungaira, mhangura, simbi, muraraungu wakatsvuka, kupera bhuruu girini yero, kune iro ruvara iwe raunotarisa neyedu zvigadzirwa zvazvino. zvakadai sezvazvinogona.
Tiri kutungamira mugadziri wemabhuru ekushongedza, isu tine girazi redu rekufemera yekugadzira mutsara. Girazi rine hunyanzvi rinofuridza tenzi.
Isu tiri mune yakadzika nhanho yeinotungamira tech mwenje indasitiri, isu tine yedu yemagetsi mainjiniya department uye emagetsi ekuyedza michina uye yekuyedza imba.
Kungoona kuti zvese zvitsva zvigadzirwa zviri kusimukira zvinotevera mutemo weEU nemirau yeUS nemimwe mirawo.
Kunaka kwakachena kwemarambi ndizvo izvo chirongwa ichi chekutevera. Tinoda kunzwa izwi rakasiyana. Chokwadi, isu tiri chete OEM fekitori base paChina, saka zano rako rinogara riri rako. Isu tinobatsira kugadzira yako kudhirowa kune yakanaka mwenje kune yakakwira degree application.